निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई अब सामाजिक सुरक्षा !
कोषमा रकम बचत नगर्नेलाई राहदानी रोक्का र इजाजत पत्र खारेजसम्मको व्यवस्था
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं | सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली पारित गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो नियमावली पारित गरेसँगै निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर र श्रमिकलाई योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा दिईने भएको छ ।
उक्त नियमावली नबन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन भएको १९ अर्ब रुपियाँ उपयोगविहीन भएर बसेको छ ।
सो कार्यक्रम लागू भएपछि श्रमिक तथा तीनका परिवारले आफूले गरेको योगदानमै आधारित भएर समाजिक सुरक्षा पाउनेछन् ।
अब भने आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नका लागि आवश्यक काम अगाडि बढाउने भएको छ ।
सम्पूर्ण रोजगारदाताले कामदारका लागि अतिरिक्त रकम सामाजिक सुरक्षाबापत सञ्चय गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकको केही प्रतिशत रकम कोषमा बचत गर्नैपर्नेछ । सोही बचतमा रोजगारदाताले योगदान गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सोही रकमबाट सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका स्किमहरु बनाएर श्रमिकलाई प्रदान गर्नेछ । यही कोषलाई परिचालन गर्न हाल सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न स्किम तयार गर्दैछ ।
हरेक श्रमिकले रोजगारदाता कम्पनी कोषमा रकम जम्मा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
यदि कुनै पनि रोजगारदाताले रकम जम्मा नगरेको पाएमा कोषले कारवाहीको दायरमा ल्याउन सक्छ ।
कोषमा रकम बचत नगर्नेलाई रोजगारदाता कम्पनीको खातादेखि राहदानी रोक्का र इजाजत पत्र खारेजसम्मको व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
कति जम्मा हुने ?
उक्त सुरक्षा कोषमा कामदारको १० प्रतिशत र रोजगारदाताको १८.३३ रकम बचत हुने निश्चित छ । ऐनअुनसार कोषमा कामदारको तलवको ३१ प्रतिशत नबढ्ने गरी कोषमा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यससँगै थप सुविधा लागि भने सरकारले समिति बनाएर दर निर्धारण गर्नेछ । सो बचत श्रमिकहरुका लागिसञ्चयकोष जस्तै हुने बताइएको छ ।
श्रमिकहरु यसमा सहभागी भएपछि मात्रै ऐनमा तोकिए अनुसार औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, बृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रति परिवार सुरक्षा पाइने कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताए ।
रोजगारदाताको दर्ता सुरु
सरकारले समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न मंसिरदेखि विभिन्न प्रदेशमा रोजगारदाताको दर्ता थाल्ने भएको छ । सो प्रक्रिया सकिएपछि मात्रै कामदारको दर्ता थालिने निर्देशक अधिकारीको भनाई छ ।
त्यसपछि कोषमा रकम बचत गर्ने काम थालिनेछ । श्रमिकका लागि अहिलेको कोषले विभिन्न स्किमहरु प्रस्ताव गरेको छ । त्यसबारे अन्तिम निर्णय भएको छैन ।
तर, सामाजिक सुरक्षा कार्याक्रम लागू गर्न अहिले कोष तीव्र रुपमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।
मंगलबार, २८ कार्तिक २०७५